သမ္မတဦးသိန်းစိန် ငြိမ်းချမ်းရေး တံခါးဖွင့်ထားကြောင်း ပြောကြား
အမြင်မတူပေမယ့် တိုင်းပြည် တိုးတက်ရေး အတွက် လက်တွဲ လုပ်ဆောင်ကြဖို့ လိုကြောင်း၊ အစိုးရ အနေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး အတွက် တံခါး ဖွင့်ထားကြောင်း ပြောကြားပြီး၊ ပြည်ပရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ နိုင်ငံကို ပြန်လာနိုင်ကြောင်း သမ္မတဦးသိန်းစိန်က ဒီကနေ့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။
နယူးယောက်မြို့တွင် ကျင်းပသော ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံတွင် မြန်မာစစ်အစိုးရ ဝန်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းစိန် ၂၀၀၉ စက်တင်ဘာ ၂၈ ရက်နေ့က စကားပြောကြားနေသည့် မှတ်တမ်းပုံ ဖြစ်ပါသည်။ (Photo: AFP)
နေပြည်တော်မှာ ဒီကနေ့ ကျင်းပတဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်တွေ၊ လူမှုရေး အဖွဲ့အစည်းတွေက ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံပွဲမှာ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က အခုလို ပြောကြားခဲ့တာ ဖြစ်ကြောင်း ဒီတွေ့ဆုံပွဲကို တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် ဇေကမ္ဘာ ဦးခင်ရွှေက RFA ကို ပြောပါတယ်။
"ပြည်ပမှာရောက်နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့ဗျာ။ ပြန်လာမယ်ဆိုရင်တော့ welcome လုပ်ပေးမယ်။ တော်ရုံ တန်ရုံ အပြစ်တွေလည်း ခွင့်လွှတ်ပေးမယ်။ ကျနော်တို့ဆီက ဦးနှောက်တွေ ယိုစီးကုန်တယ်ဗျာ။ ဖိတ်ခေါ်တယ် ဆိုကတည်းက နောက်ပိုင်းမှာ စီးပွါးရေးတွေမှာပါ ဖွံ့ဖြိုးအောင် လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ သဘောမျိုး။"
အခုလို ပြည်ပ နိုင်ငံ အသီးအသီးကို ရောက်ရှိနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကို ပြန်လာဖို့ ဖိတ်ခေါ်တာဟာ နိုင်ငံ တည်ဆောက်ရေးအတွက် အရေးကြီးတဲ့ ကမ်းလှမ်းချက် ဖြစ်တာမို့ ကြိုဆိုကြောင်း အန်အယ်လ်ဒီ ပါတီ ဗဟို အလုပ် အမှုဆောင် အဖွဲ့ဝင် ဦးဝင်းတင်က ပြောပါတယ်။
"နိုင်ငံခြားရောက် မြန်မာတွေ ပြန်လာရေးဆိုတာ အလွန်ကောင်းတဲ့ အရာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ နိုင်ငံခြားရောက် မြန်မာတွေဟာ ပညာ ဗဟုသုတတွေ ရနေတယ်။ အတွေ့အကြုံတွေ ရနေတယ်။ ဒီလို ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ ပြည်တွင်းကို ပြန်လာနိုင်မယ် ဆိုရင်ပေါ့ဗျာ။ အစိုးရက ပေးတဲ့ အခြေအနေ ဆိုတာ ဘယ်လို အခြေအနေလဲ ဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့။ အခြေအနေ ပေးတဲ့အတိုင်း ဘယ်လိုဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ပြည်တွင်းကို ပြန်လာနိုင်မယ် ဆိုလို့ရှိရင် ပြည်တွင်းမှာ အများကြီး အားတက်စရာတွေ၊ သို့မဟုတ်ရင်လည်း အင်အား ပြည့်ဖြိုးစရာတွေ ဖြစ်မယ်လို့ ကျနော် ယုံကြည်တယ်။ ဒါကြောင့် ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း ကျနော် သဘောတူပါတယ်။"
ဒါ့ပြင် လယ်သမားတွေ အတွက် ဈေးနှုန်း အာမခံပေးပြီး စပါးဝယ်ယူဖို့ အစီအစဉ် ရှိကြောင်းကိုလည်း ဦးသိန်းစိန်က ပြောကြားခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒီတွေ့ဆုံပွဲကို စီးပွားရေးနဲ့ လူမှုရေး အဖွဲ့အစည်း အသီးသီးက လူပုဂ္ဂိုလ် ၄၀၀ ကျော် တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒီကနေ့ နေပြည်တော်မှာ ကျင်းပတဲ့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နဲ့ စီးပွားရေးနဲ့ လူမှုရေး အဖွဲ့အစည်းတွေက ကိုယ်စားလှယ်တွေ တွေ့ဆုံပွဲကို တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်း ဥက္ကဌ၊ မြန်မာနိုင်ငံ ဆောက်လုပ်ရေး ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်း ဥက္ကဌ အထက်လွှတ်တော်အမတ် ဇေကမ္ဘာ ဦးခင်ရွှေကို RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်ကျော်အောင်က ဆက်သွယ် မေးမြန်းထားတာ နားဆင်နိုင် ပါတယ်။
အစည်းအဝေးကို တက်ရောက်ခဲ့သူ နောက်တဦးဖြစ်တဲ့ နာရေး ကူညီမှု အသင်း ရန်ကုန်က ဒေါ်ရွှေဇီးဂွက်ကိုလည်း ဦးတင်အောင်ခိုင်က ဆက်လက် မေးမြန်းထားပါတယ်။
အစည်းအဝေးမှာ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ရဲ့ ပြောကြားချက်များနဲ့ ပတ်သက်ပြီး NLD ဗဟို အလုပ် အမူဆောင် အဖွဲ့ဝင် ဦးဝင်းတင်က ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်၊ ဒေါ်ခင်ခင်အိက တင်ပြပါလိမ့်မယ်။
အလားတူ သမ္မတဦးသိန်းစိန်ရဲ့ မိန့်ခွန်းအပေါ် ပြည်တွင်း စာနယ်ဇင်းများရဲ့ အမြင်နဲ့ ပြည်ပ နိုင်ငံရေး အတိုက်အခံတွေရဲ့ အမြင်ကို ဦးတင်အောင်ခိုင်က ဆက်ပြီးတင်ပြမှာပါ။
FREE POLITICAL PRISONER FIRST
Aug 18, 2011 08:54 PM
Don't be mad, Please free the political prisoner first.
Aug 18, 2011 08:49 PM
Aug 18, 2011 08:48 AM
ဦး လူေတြကုိလိမ္ျပီးေခၚတာ ဦးမရွက္ဘူးလား?
ဦးရူးတာကုိ ႏုိင္ငံတကာက သိေနႀကျပီ . ႏုိင္ငံတ
ေတ . ဦးထက္ဦးေႏွာက္ရွိတယ္. ပုိးေႀကာင္
Aug 18, 2011 08:43 AM
Opening door with 2008 constitution